Halkan waxaa ah 6 Dariiqo oo barnaamijyada moobiilku ay gacan uga geysanayaan kobaca ganacsiga | Martech Zone
Maaddaama qaababka wareega ee mobilada ay yareeyaan waqtiga horumarka isla markaana hoos u dhigayaan kharashyada horumarinta, codsiyada moobiillada ayaa noqonaya mid ay lama huraan u yihiin shirkado badan si ay u wadaan hal-abuurnimada. Dhisida dalabkaaga mobilka qiimo jaban oo aan lagaran karin sida ay ahayd dhowr sano ka hor.
Shidaal siinta warshadaha waa shirkado horumarineed oo barnaamijyo leh xarumo takhasusyo kala duwan leh iyo shahaadooyin, dhammaantoodna dagaal ku dhisan dhisida codsiyada ganacsiga oo si togan u saameyn kara dhinac kasta oo ganacsigaaga ah.
Sidee barnaamijyada moobiladu u kobcin karaan ganacsigaaga
Kordhi Saldhigga Macaamiishaada - Marna ma ogaan doontid haddii badeecadaada ama adeeggaagu uu isku beddelayo mid ku dhaca ummad fog. App aan caadi ahayn oo bakhaarka lagu iibiyo, oo ah barnaamij mobilada la fududeeyay ayaa u horseedi kara kobaca caalamiga ah ganacsigaaga. Intaas oo keliya maahan, waxaad heli kartaa horumarinta barnaamijka moobiilka oo si macquul ah looga fulin karo dibedda sidoo kale!
Qaadista Taraafikada iyo Wacyigelinta Calaamadaha - Codsi moobiil ah oo waxtar leh, oo aan caadi ahayn ayaa sumaddaada sare gelinaya maskaxda. Codsiyada moobiilka ayaa wadi kara ka-qaybgalka omni-channel, xitaa wadista taraafikada iyo u-beddelashada ku soo noqoshada webkaaga, bogga e-commerce, ama kanaalada bulshada.
Kordhi Hawlgelinta Macaamiisha - Codsiyada moobiilku aad ayey uga xoog badan yihiin shabakadda moobiilka, oo leh marin u helka adeegyada goobta, u dhow isgaarsiinta aagga, xawaareyaasha, kamaradaha, makarafoonnada, iyo xitaa aaladaha biometric-ka. Taasi waxay soo bandhigi kartaa noocyo is-dhexgal iyo ka-hawlgal badan.
Adeegga Macaamiisha Streamline - Kordhi daacadnimada macaamiisha adoo siinaya khadka tooska ah ee taageerada barnaamijkaaga moobiilka. Hadday tahay guji-wacitaan, wada sheekeysi, wadaag shaashad, adeeg la caawiyay, ama xitaa fiidiyoow is-dhexgal ah, shirkaddaadu waxay si weyn kor ugu qaadi kartaa ka-qaybgalka macaamiisha.
Hagaajinta Dakhliga - Si ka duwan leben bir ah iyo hoobiye, codsiyada moobiilku waxay furan yihiin 24 saacadood maalintii, 7 maalmood usbuucii, iyo 365 maalmood oo sannadka ka baxsan. Codsiyada moobiilka waxay sidoo kale heli karaan boorsooyinka moobiilka, iyagoo siinaya habab fudud oo oggolaansho u leh iibsashada.
Hawlgelinta Shaqaalaha - Warshadaha sii kordhaya waxay dhisayaan codsiyo gudaha ah oo loogu talagalay shaqaalaha cilmi baarista, dukumiintiyada, iyo isdhexgalka gudaha. Tani waxay horseed u tahay hal-abuurnimada meheradaha waaweyn iyadoo la yareynayo isgaarsiinta iyo habsami-u-socodka isbaarooyinka.
Sidee ku saabsan aan duubnaa!
Qofna ma diidi karo in barnaamijyada moobiilku ay tamar siin karaan ganacsigaaga. Ma haysaa wax fikrad ah oo ku saabsan codsi moobiil?
Tags: wacyigelinta noocahawlgelinta macaamiishaAdeegga macaamiishaHawlgelinta Shaqaalahakordhin macaamiishakordhinta dakhligaqaadista taraafikadaapp mobilecodsiga mobilehorumarinta codsi wareegaDakhliga
Sidee Teknolojiyadda Dijital ah u Saameyneysaa Muuqaalka Muuqaalka Hal-abuurka ah